जनवरी २०१ - - नेटवर्क रेडियो
घर / 2018 / जनवरी
प्रकाशित जनवरी 24, 2018 जनवरी 28, 2018
नयाँ Echolink Inrico TM-7 र सबै अन्य नेटवर्क रेडियोको लागि जारी गरियो
नयाँ डाउनलोड गर्नुहोस् Echolink संस्करण! यो संग राम्रो काम गर्दछ Inrico TM-7। PTT बटन कार्यक्षमता थप गरिएको छ र स्क्रिन UI को विशिष्ट आवश्यकताहरू फिट गर्न समायोजित गरिएको छ Inrico TM-7.
एक संग परीक्षण गरिएको छ टकपड N58, रेडियो टोन RT4, र स्पष्ट रूपमा, सँग टीएम-7। सबै नेटवर्क रेडियोहरूले यस Echolink संस्करणको साथ राम्रोसँग काम गर्नुपर्दछ, सहित निश्चित F22 +, F25, Inrico T298s र नयाँ पनि Inrico T320.
यदि तपाइँ चलाउन चाहानुहुन्छ भने इकोलिंक र Zello एकै समयमा, कृपया पढ्नुहोस् यो.
तलको भिडियो हेर्नुहोस्:
Inrico बाट नयाँ 4G रेडियो जारी गरिएको छ
नयाँ Inrico T320 अहिले ढुवानी गर्दैछ। यसले G जी एलटीई प्रस्ताव गर्दछ र यो पहिलो Androidन्ड्रोइड .4.० आधारित नेटवर्क रेडियो हो 7.0० घण्टा स्ट्यान्ड-बाइ समयको साथ! तिनीहरू जान्दछन् कि उनीहरू के गर्दैछन्। 80००० एकाइहरू पठाउन तयार छन्। के तपाइँ एक चाहानुहुन्छ? अब अर्डर गर्नुहोस्!
PTT4U पेशेवरहरूको लागि एक अत्याधुनिक नेटवर्क रेडियो सेवा हो।
GSM संकेतमा भर पर्दै, हाम्रो रेडियोले एक अर्कासँग कुनै दायरा प्रतिबन्ध बिना कुरा गर्न सक्नेछ। प्रत्येक रेडियोले सिम कार्डको साथ काम गर्दछ (समावेश नगरिएको) र GSM / 3G / 4G प्रयोग गर्दछ र केहि मोडहरू वाइफाइ संकेतको साथ पनि काम गर्दछ। यसको अर्थ तपाईं भाग्य खर्च गर्न आवश्यक छैन महँगो रेडियो इन्फ्रा स्ट्रक्चर, रिपीटर, एन्टेना वा साइट भाडामा। सबै नेटवर्क इन्फ्रा-संरचना GSM वाहक द्वारा प्रदान गरीएको छ।
निजी र समूह कलहरू उपलब्ध छन्। तपाईको टीमका सदस्यहरू बिभिन्न देशहरूमा हुन सक्छन् र पहुँच भित्र नै छन्। प्रत्येक प्रयोगकर्ताले एक अर्काको स्थान जाँच गर्न सक्दछ (उनीहरूको प्रोफाइलमा आधारित), सन्देशहरू र SOS सतर्कताहरू पठाउन।
तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको हाम्रो नेटवर्क रेडियोहरू खरिद गर्नु हो, तपाईको आवश्यकता अनुसार, रेडियोमा तपाईको मनपर्ने क्यारियर सिम कार्ड घुसाउनुहोस् (M०० एमबीको मासिक डेटा योजना पर्याप्त हुनेछ) र वार्षिक सदस्यता लिनुहोस् PTT4U सेवा। तपाईंलाई प्रत्येक रेडियोको लागि एक वार्षिक $। $ सदस्यता आवश्यक हुनेछ। र यो हो! कुनै अधिक टाउको दुख्ने
प्रकाशित जनवरी 3, 2018 जनवरी 3, 2018
चिकनी APRS अपरेशनको साथ रेडियो टोन RT4
लोकप्रिय संग APRS अपरेटिंग रेडियो टोन RT4 सजिलो हुन सक्दैन। उच्च-संवेदनशील जीपीएस एन्टेना र विश्व भर जीएसएम टावरहरूको स्थान तपाईंको नेटवर्कमा तपाईंको स्थान पिंग गर्दैछ। मात्र Play Store बाट APRSDroid स्थापना गर्नुहोस् र जाँदा सबै ह्याम गतिविधि जाँच गर्नुहोस्। तपाईंको साथीहरूलाई थाहा दिनुहोस् तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईंको वेग, उचाई र हेडि।।
को संभावनाहरु RT4 अनन्त छन्। र तपाईं? के तपाईं पहिले नै नेटवर्क रेडियो संग खेल गर्दै हुनुहुन्छ?
प्रकाशित जनवरी 1, 2018 जनवरी 1, 2018
5 ईन्क्रिको टीएम-7 ट्रान्ससीभरको साथ तपाईले गर्न सक्ने चीजहरू
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईं एक गर्न सक्नुहुन्छ Inrico TM-7। तपाईलाई सबै चाहिन्छ जीएसएम वा वाइफाइ जडान।
DMR हटस्पट नियन्त्रण
तपाईं BlueDV स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको Inrico प्रयोग गर्नुहोस् टीएम-7 नियन्त्रण गर्नaडीभीमेगा हटस्पट।
पूर्ण एपीआरएस क्षमता थप्नु केकको टुक्रा हो। केवल तपाईंको लागि APRSDroid स्थापना गर्नुहोस् टीएम-7 र रियलटाइममा तपाईंको स्थान साझेदारी गर्नुहोस्।
यस नेटवर्क रेडियोको साथ Echolink प्रयोग गर्नाले तपाइँलाई दु: ख दिन्छ। कुनै लिंक वा उपलब्ध सम्मेलन छनौट गर्नुहोस्। QSO हरू गर्नुहोस् जब तपाईं चाहनुहुन्छ। २//24!
यससँग एक सबैभन्दा लोकप्रिय मोडहरू टीएम-7। IRN एक रमाईलो हब हो जुन धेरै नेटवर्कमा हम्सलाई जोड्दछ, जस्तै Allstar, Echolink र DMR।
अपरेशन स्क्यान गर्दै
नि: शुल्क अनुप्रयोगको प्रसारण स्थापित गर्नुहोस् र प्रसारण गर्नुहोस् तपाईंको टीएम-7 पुलिस, फायर डिपार्टमेन्ट, एटीसी र अन्य सार्वजनिक सेवा संचारको विश्वव्यापी स्क्यानर रिसीभरमा।
आज तपाईंको Inrico TM-7 अर्डर गर्नुहोस्!
प्रकाशित जनवरी 1, 2018 जनवरी 2, 2018
Inrico TM-7 न्यूकासल (यूके) बाट सिएटल (अमेरिका) सम्म MI6SSZ द्वारा
केहि व्यक्तिले यसको गौरवशाली मोबाइल फोनलाई भन्दछन् तपाई राम्रो पुन: क्रमबद्ध गर्नुहोस् जब सम्म तपाई रिपीटर स्टेसनमा हिर्काउनुहुन्न र यसको प्रयोग गर्न तपाई एक योग्य ह्याम अप हुनु पर्छ।
राम्रो सफा चीज राम्रो संग निर्मित सजिलो यातायात को लागी दुनिया मा कहीं पनि जीपीएस एन्टेना को साथ प्राप्त गर्न को लागी चिन्ता लिनु आवश्यक छैन यदि तपाईं संग एक संकेत छ भने
यदि तपाईं एन्टेना राख्न प्रतिबन्धित हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं फ्ल्याटमा बस्नुहुन्छ भने यो उत्तम छ
स्क्रिन त्यो तेजस्वी बाहेक केही सानो ठूलो हुन सक्दछ यो केवल ती रेडियोहरू मध्ये एक हो जुन तपाईं पाउनुभयो
पसलको लागि SOUND OF ANGELS राम्रो सेवा स्पट छ र तिनीहरूले तपाईंलाई तपाईंको अर्डरको प्रगतिमा मिति राख्छन् 7/9 कार्य दिनहरूमा मेरो भयो
सम्भव भए पनि धेरै सहयोगी छ र डाक मूल्यमा भारी छ तर यो DHL छ ताकि तिनीहरूले तपाईंलाई प्राप्त गर्न सुरुबाट सूचित गर्न जारी राख्नु पर्दछ।
म यससँग धेरै खुसी छु र म एउटा ह्याम रेडियो छ र यो रेडियोको साथ पत्ता लगाउनको लागि एउटा नयाँ संसार छ यसको एकैचोटि पत्ता लगाई तपाईंले एकपटक त्यसो गर्नुभयो भने तपाईंको सबै कुरा तपाईंको लागि खुलियो।
ब्रिटेनमा एउटा द्रुत उदाहरण टाईने न्यु क्यासलको सुपरमार्केटमा पार्क गरिएको टायलले सिएटल नोर एसआरएन नो एनआरएन कसैसँग कुरा गर्दैछ कुनै एन्टिना ट्युनर छैन कुनै ठूलो एरियलको एउटा सानो ब्ल्याक बक्सलाई ड्याशबोर्डमा एक माचिस बक्सको आकार छ।
राम्रो छ हामीसँग राम्रो स्टोरको राम्रो पसलबाट राम्रो सेवा छ
एलेक्स MI6SSZ ZELLO मा
यसको बारेमा थप पढ्नुहोस् Inrico TM-7